यी खानेकुरा जसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ – विराट अनलाइन खवर
biratonlinenews 10/06/2020 1 min read
हरिया सागसब्जीहरूमा पनि पालुङ्गोलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । पालुङ्गोमा क्यारोटिन, एन्टिअक्सिडेन्ट तत्वका साथै भिटामिन सी पाइन्छ । पालुङ्गोले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक पर्ने भिटामिन तथा पोषण तत्वको पूर्ति गर्छ ।source
Tags: अंगुर पनि भिटामिन ‘सी’ तथा एन्टीअक्सिडेन्टको राम्रो स्रोत हो। भिटामिन ‘सी’ ले सेतो रक्तकोषिका उत्पादन गर्न सहयोग गर्छ कागती । कागतीका साथै सुन्तला जसले संक्रमणसँग लड्न मद्दत गर्छ। भिटामिन ‘सी’को राम्रो स्रोत हो यी खानेकुरा जसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ
Previous स्वस्थ, स्फूर्ति र ताजापनका लागि जरुरी ६ हर्मोन, कसरी बढाउने ?
Next जाडो मौसममा व्यायाम : कति गर्ने, कहाँ गर्ने ?
1 thought on “यी खानेकुरा जसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ”
viagra no prescription next day delivery viagra6free samples buy viagra no prescription